Iimpawu ezibalulekileyo malunga neebhere
Iibhere zineendawo ezikhethiweyo kwiinkcubeko zepop: kungekhona njengento enjengezinja okanye iinkati, kungeyona ingozi njengeengcuka okanye iintala zeentaba, kodwa isonwabile ngokwaneleyo ukuba ziqwalaselwe izinto zokwesaba, ukunyaniseka kunye nomona.
Kukho Iintlobo Ezi-8 Ezihlukeneyo Zeebhere
Amabhere amnyama aseMelika (i- Ursus americanus ) ahlala eNyakatho Melika naseMexico; Ukutya kwabo kubandakanya amaqabunga, amaqabunga, amahlumela, amajikijolo kunye namantongomane. Iintlobo zebhere ziquka ibhere le-cinnamon, ibhere le-glacier, ibhere elimnyama laseMexico, i-Kermody bear, i-bear yaseLouana kunye nabanye abaninzi.
Izibhere ezimnyama zase-Asia (i- Ursus thibetanus ) zihlala kwi-Asia-mpuma ne-East Far East. Zineempawu ezinobungozi kunye neentambo ezinobumba obuphuzi obubomvu kwiifubeni zazo, kodwa ngenye indlela zifana neebhere zaseMerika ezimnyama ngokomzimba, ukuziphatha kunye nokutya.
Iibhere zeBrown (i- Ursus arctos ) zizinye zezilwanyana ezidliwayo emhlabeni jikelele. Zihamba ngaphesheya kweMntla Melika, iYurophu kunye ne-Asia, kwaye zibandakanya iindidi ezincinci, ezifana nebheyi laseCarpathian, ibhere elibomvu laseYurophu, ibhere leGobi, ibhere le-grizzly, ibhere le-Kodiak kunye nabanye abaninzi.
Iibhere ze-Polar (i- Ursus maritimus ) iibhere ezimnyama ezinobuninzi. Ezi zimbombo zikhawulelwe kummandla wecala e-Arctic, zifikelela ngasezantsi zenyuka enyakatho yeKhanada naseAlaska. Xa bengabikho kwiipakethe ze-ice kunye neelwandle, iibhere ezihamba ngamanzi zihamba emanzini avulekileyo, zondla ngeempawu kunye nezikhonkwane.
I-pandas enkulu (i- Aeluropoda melanoleuca ) isondla phantse kwi-bamboo amahlumela kunye namaqabunga kwimimandla ephakathi kunye nentshona yasentshonalanga yeChina. Ezi zibhebhe eziphathekayo zimizimba emnyama, ubuso obumhlophe, iindlebe ezimnyama kunye namabala amnyama.
Iibhere ze- sloth (i- Melursus ursinus ) isityalo seengcawa, amahlathi kunye neziqhwala ezisezantsi-mpuma ye-Asia. Ezi zibheba zininzi, iingubo ezinxibe zoboya kunye namacwecwe amhlophe esifubeni; Bondla kwii-termites, abayifumanayo ngokusebenzisa ingqondo yabo ephilileyo.
Iibhere ezibonakalayo ( Tremarctos ornatos ) ziphela zimbombo ezivela eMzantsi Melika, ezihlala emahlathini amafu ngokuphakama kwama-3,000. Ezi zibhekezi zihlala zihlala ezidongeni zonxweme kunye neendawo eziphakamileyo eziphakamileyo, kodwa ukudibanisa kwabantu kuye kwaluthintela uluhlu lwabo.
Iibhere zelanga (i- Helarctos malayanos ) zihlala emahlathini aseTropical asezantsi ase-Asia-mpuma. Le mijelo emincinci inomso omfutshane kunabo naziphi na iintlobo zebhere, iifubeni zazo eziphawulwe ngokukhanya, obomvu obunobomvu, obubunjwa obubomvu obufana neU.
Zonke Iibalo Zababelana Ngeziganeko ezithile zeAnatomical
Ibhere lelanga. Getty Images.
Kukho ezinye izinto ezincinci, kodwa zonke iintlobo zeebhere ezisibhozo ezichazwe ngasentla zinokubonakala ngendlela efanayo: iiforos ezinkulu, imilenze egciniweyo, iincinci ezincinci, iinwele ezinde, imisila emfutshane, kunye ne-posttigrade postures (oko kukuthi, iibhere zihamba ngeenyawo eziphantsi komhlaba, nje ngabantu kodwa ngokungafani nezinye izilwanyana ezincelisayo). Uninzi lweebhere zikwa-omnivorous, zithatha ikhefu ngenyameko kwizilwanyana, iziqhamo kunye nemifuno, kunye nezibini ezimbini ezibalulekileyo: ibhere le-polar liphantse lithengiswa ngokuzidla, lithwala izibonda kunye neelrruses, kwaye i-panda bear ihlala ihlala kwi-bamboo shots (nangona kunjalo, indlela yokugaya inyama ihambelana nokutya inyama).
Iibhere Zizilwanyana Ezizinzileyo
Ibhere leBrown. Getty Images
Iibhere zingase zibe zizilwanyana ezingenasisondlo ebusweni bomhlaba. Ukuthandana phakathi kwamadoda amadala kunye namabhinqa kukufutshane kakhulu, kwaye emva kokuqhathaniswa, amabhinqa asele ekukhuliseni abancinci ngokwabo-ixesha elimalunga neminyaka emithathu, apho (ukulangazelela ukuzala nabanye abesilisa) baxoshe iibhubhu kude ukuzibamba. Iibhere ezikhulile ngokupheleleyo ziphela zodwa, ezo ziindaba ezilungileyo zabakhenkethi abahlangabezana nengozi kunye ne-grizzlies kwinyango, kodwa kunzima xa ucinga ukuba uninzi lwezilwanyana ezidliwayo kunye ne-omnivorous (ezivela kwiimbombo eziya kwihagu) zivame ukuhlanganisana ubuncinci maqela.
Izidalwa ezisondeleyo zeebhere ziyiMpawu
UAmphicyon, inja yebhere ". Wikimedia Commons
Ngenxa yobuninzi bezinto ezinjengo-"izinja zokubetha" izigidi zeminyaka edlulileyo-kubandakanywa nomlingani ohlala kwintsapho, u- Amphicyon- unokucinga ukuba iibhere zanamhlanje zihlobene kakhulu nezinja. Enyanisweni, uhlalutyo lwee molecular lubonisa ukuba izihlobo ezikufuphi zokuhlala kwezibhere ziyi-pinnipeds, intsapho yezilwanyana zasemanzini ezibandakanya zombini iimpawu kunye nezikhonkwane. Iintlobo zombini za ma mammalia zihla ekhokho, okanye "u-concestor", ohlala ixesha elithile ngexesha le- Eocene , malunga ne-40 okanye i-50 yezigidi zeminyaka edlulileyo-nangona okokuthi ukuchongwa kweentlobo zezilwanyana kusekho into yokucinga.
"Bear" ivela kwi-Old Germanic Root ye "Brown"
Ngenxa yokuba abantu baseYurophu abaneminyaka engabonakali kakhulu kunye neebhere okanye iipanda, kunengqiqo ukuba abalimi babonakalisa iibhere kunye nombala obomvu - apho igama lalo silwanyana livela khona, ukusuka kwingcambu yakudala yaseJamani "bera . " Iibhere ziyaziwa nangokuthi "ursines," igama elinemvelaphi yamandulo nakwiilwimi zaseProto-Indo-Yurophu ezathethwa kude kube ngu-3 500 BC. (Ukunyaniseka kwezibhere kusemgangathweni, ngenxa yokuba abantu bokuqala bahlala e-Eurasia bahlala kufuphi kufuphi neebhere , kwaye ngamanye amaxesha banqula loo maqegu njengothixo.)
Uninzi lweeBhears Hibernate Ngethuba lasebusika
Ibhere elibonakalayo. Wikimedia Commons
Ngenxa yokuba ubuninzi beebhere zihlala kwiindawo eziphezulu ezisenyakatho, zifuna indlela yokusinda kwiinyanga zasebusika, xa ukutya kungabikho kancinci. Isisombululo esithatyathwa ngokuziphendukela kwemvelo siyi-hibernation: iibhere zilala ebuthongweni obunzulu, zihlala ixesha elide, apho iintliziyo zabo zihlawulela kunye neenkqubo zokuxilisa. Nangona kunjalo, ukuhlala e-hibernation akufani nokuba ku-coma: ukuba ivuke ngokwaneleyo, ibhere lingasuka phakathi kwendawo yokuqhayisa, kunye namabhinqa ayaziwa nokuba abelethe ebusweni busika. (Sinobubungqina beengqungquthela zeengonyama ezithandwayo kwiibhere ze-hibernating ngexesha lokugqibela kwe-Ice Age; ezinye zazo zivuke zize zibulale abantu abangenayo i-intruders!)
Iibhere zi zizilwanyana ezidumileyo
Ibhere elibomvu laseSiriya. Wikimedia Commons
Ngokuxhomekeka kwiintlobo zezilwanyana, izidingo zonxibelelwano eziphambili zingabonakaliswa kunye namazwi "ahlukeneyo" anesibhozo okanye asibhozo-amaqhinga, amaqhinga, ukugubha, ukugubha, iingubo, iindwangu, iimbumba kunye / okanye izibonda. Njengoko usenokuqikelela, izandi eziyingozi kakhulu kubantu zibetha kunye neengqungquthela, ezibonisa ibhere elithusa okanye elikhuselayo elikhusela ummandla walo. U-Huffs uveliswa ngokubambisana kunye neendlela zokutshatana, ama-hums asetyenziswa ngamabhubhu ukuze afune ukunakwa koomama (okufana nokuhlanjululwa kweekati, kodwa ngokugqithiseleyo), kunye nokuxakazela ukuveza uxhalabo okanye ingozi. Ama-pandas amakhulu anesigama esincinane kunokowabo abazalwana; Ukongeza kwizandi ezichazwe ngasentla, banokugubungela, ukudibanisa kunye nokuhlamba.
Iibhere Zenza i-Dimorphic Sexual
Ibhere le-grizzly ibhinqa layo. Wikimedia Commons
Njengabantakwabo abasondeleyo, iimpawu kunye nezikhonkwane, iibhere zizinye zezilwanyana ezihamba ngesondo kwihlabathi: iindoda zikhulu kakhulu kunabesifazane, kwaye inkulu kakhulu iindidi, inkulu enkulu ukungalingani ngobukhulu. (Kwii-subspecies ezinobuninzi bebhere ezimnyama, umzekelo, amadoda ayesisigidi samapounds angamawaka kunye neentombi kuphela ngaphaya kwesigamu.) Nangona kunjalo, nangona iibhere zezintombi zincinci kunamadoda; abayithandi ncam; Bayakukhusela ngamandla amathole abo kwiibhere zebhinqa, kungakhankanywa nabani na abantu abangenangqondo ukuphazamisa inkqubo yokukhulisa abantwana. (Iibhere zamadoda ziza kuhlaselwa zize zibulale iibhokhwe zohlobo lwazo, ukuze zenze ukuba abesifazane bazalwe kwakhona.)
Izibhere Musa ukuzibophelela kakuhle kwizindlu
Ibhasi le-Kodiak. Wikimedia Commons
Kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo, abantu baye bahlakulela ikati, izinja, ihagu kunye neenkomo-ngoko kutheni kungenabhere, isilwanyana apho iHomo sapiens iqhube khona ukususela ekupheleni kwexesha lePleistocene ? Ewe, iibhere zizilwanyana ezizimeleyo, ngoko akukho ndawo yokuba ngumqeqeshi womntu ukuba azifake ngokwakhe "kwiindawo eziphezulu zokulawula" njengendoda yesafa; Kwakhona, iibhere zilandela izidlo ezihlukahlukeneyo eziya kuba nzima ukugcina ngisho nabantu abaninzi abanikezelwa kakuhle. Mhlawumbi kubaluleke kakhulu, iibhere zixhalabile kwaye zinobudlova xa zigxininisekile, kwaye nje azinabantu abafanelekileyo ukuba babe yindlu (okanye ididi) ezifuywayo!
Iibhere ziphakathi kwezona zilwanyana ezisengozini
Ibhere eliyiphola. Getty Images.
Ukuqwalasela ukuba abantu bokuqala babesebenzisa ukukhonza izithwala njengothixo, ubudlelwane bethu kunye ne-ursines abuzange bube yi-stellar ngaphezu kweeminyaka embalwa edluleyo. Iibhere zixhaphake kakhulu kwiindawo zokubhujiswa kweendawo, zivame ukuzingelwa ngemidlalo, kwaye (ukuba sinokudibanisa izilwanyana zethu) zivame ukuba zizihlazo xa zihlaselwa iindawo zokuhlaselwa kwimizila yasendle okanye imfucumfucu ziguqulwa kumadlelo. Namhlanje, ii-ursines ezisengozini kakhulu zizibhere ze-panda (ngenxa yokutshitshiswa kwamahlathi kunye nokudibanisa kwabantu) kunye neebhere eziphambili (ngenxa yokufudumala kwehlabathi); nangona kunjalo, iibhere ezimnyama nezibomvu zibambe zodwa, nangona ukusebenzisana kakubi nabantu kuye kwanda njengoko indawo yokuhlala yazo iphela.
I-Amur Leopard: Enye yeeNkcubeko zezona ziNinzi ezisengozini
Iingoma kunye neengcamango ezingalunganga: Inyaniso malunga neWicca nePaganism